कुनाकानी : मेरो परिवेश: May 2010
संविधान एक सपना
त्यसदिन बिहानै देखि जाँगर भरिएको थियो । मनमा उत्साह थियो । अनि उमंग पनि । चैतको महिना घाम बिहानै चर्केजस्तो देखिन्थ्यो , तर पनि मौसमले साथ दिएकै जस्तो लाग्थ्यो ।
हामी जनता, भोट खसाल्न हिँडेका अफ्नो भविष्य आफै कोर्न हिँडेका । यस गैरवले छाती नै फूलेको थियो हाम्रा । लामबद्द भएर सबैजना पालो कुरी बसेका । त्यो थियो संविधानसभाको निर्वाचनको दिन अर्थात् २०६४ चैत्र २८ गते ।
निर्वाचनको परिणाम आयो नयाँ नामहरू राजनैतिक वृतमा सुनिन थालिए । सरकार बन्यो तर निकै समय पछि । बिहानीले दिन बताउँछ भने जस्तै सुरूवातका ति दिनहरूले नै संविधान लाइ समयमा बनाउन सकिएला र ? भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा उठीसकेको थियो ।
झन् पछि झन् जनताको आशामा तुसारोपात लाग्दै गएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनको दिन देखि आज सम्म अइपुग्दा हामीमा अब न त केही हुने अशा बाँकी रहेको छ न त सपना नै । पढेको थिएँ सबैभन्दा डरलाग्दो हुन्छ सपनाहरूको मृत्यू । तर नेपालको राजनीतिले हाम्रो सपनालाइ कुन मोडमा ल्याएर लत्याइदियो पत्तै भएन ।
विश्वको सबैभन्दा राम्रो राजनैतिक व्यवस्था लोकतन्त्र democracy हो भनिन्छ । जनताको लागी जनताद्वारा शासन गरिने व्यवस्था रे । तर यहाँ हेर्दा त लाग्छ हामी जनता केवल भर्याङ मात्र हुँदा रहेछैँ जसको कुनै अर्थ नै हुँदैन डेमोक्रेसीमा । बाँकी शासन त अर्कैले गर्दा रहेछन् । संविधान सभाको दुइ वर्षे अवधिले यसैलाइ त पुष्टि गर्दियो नि होइन ? जनताले चुनेकाबाट शासन हुनुपर्नेमा जनताले नचाहेका मानिसले शासन गरे त्यो पनि जिम्मेवारहिन भएर । राजनीतिको यस्तो घृणित चाला देख्दा राजनैतिक सचेतता बेकार भएछ आफूमा भन्ने पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ ।
आज जेठ १४ संविधान जारी हुनुपर्ने तर नभएको दिन मेरो निराश मनले अरू बढी केही देख्न सकेन । इतिश्री ।
Posted by वसन्त बलामी at 10:32 PM 1 comment: